Location: Mbido » Ịdee » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Mweghachi njem ọhụrụ na-ewelite mgbanwe
2022 ga-ahụ ọganihu na-aga n'ihu na mgbake ka ụlọ ọrụ nkwari akụ na-anabata mkpa mgbanwe nke onye njem "ọhụrụ".
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-achọ nleba anya na mgbanwe iji jikwaa
nọgidere na-agbanwe agbanwe. Mana ihe ịma aka nke afọ ndị gara aga akwadola ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ọma iji were ohere ndị dị n'ihu.
Ihe a chọrọ na ọchịchọ nke onye njem ọhụrụ ahụ nwere mmetụta maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ha na-esetịpụ ihe ndị dị mkpa na mkpa itinye uche na ntinye ego iji mezuo mkpa ndị ọbịa nke ọma. N'afọ 2022, iwughachi ndị ọrụ, na-agbadata ugboro abụọ na nkwado, na ịmaliteghachi iguzosi ike n'ihe ga-abụ akụkụ dị mkpa maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị chọrọ ka ọ dị mkpa maka onye njem ọhụrụ ahụ.
Rebuilding the Hotel Workforce for the New Era of Travel
Ihe ịma aka ndị ọrụ egbochila ịlaghachi n'ọnọdụ nkịtị n'ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ofe mba ahụ, na-eme ka o sie ike ịzaghachi ọchịchọ na-eto eto. Ọ bụ ezie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ụkọ ọrụ n'afọ gara aga, ụkọ siri ike na ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ihi ma ọrịa ọrịa na-efe efe na ebili mmiri nke ndị mmadụ na-ahapụ onwe ha, na-abụkarị maka ohere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Nsonaazụ nke nyocha ndị otu AHLA October 2021 na-ekpughe etu ọnọdụ ahụ siri sie ike ugbu a.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile (94%) zara na-ekwu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ha enweghị ọrụ, gụnyere 47% ndị na-ekwu na ha enweghị nnukwu ọrụ. Ọzọkwa, 96% nke ndị zara ajụjụ na-anwa iwere ọrụ mana ha enweghị ike imeju ọnọdụ mepere emepe.
Ka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ mgbake na 2022, iwughachi ọdọ mmiri talent ga-adị mkpa iji gboo mkpa nke onye njem ọhụrụ ahụ. E kwuwerị, ndị
Atụmatụ ụlọ ọrụ ga-akwụsị 2022 gbadata ndị ọrụ 166,000 ma e jiri ya tụnyere 2019.37
Ndị na-ewe ndị ọrụ ga-adịkwa mgbagwoju anya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ enyere
asọmpi siri ike.
Ozi ọma ahụ bụ na enwere ohere iji dọta ma jigide ndị ọrụ na ọhụrụ
ụzọ. Nke a nwere ike ịpụta ịmalite na mbọ ndị dị ugbu a ịkụziri ndị mmadụ ihe niile
ụzọ ọrụ na-atọ ụtọ ma na-enye mmepe ọrụ yana ọzụzụ nka dị mkpa.
Ndị na-eme ntuli aka taa na-eche maka ụzọ ọrụ, nhazi ọrụ na-agbanwe agbanwe, na ọzụzụ nka nke na-eme ka ha nwee ike ịrụ ọrụ n'ọdịnihu. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwekwara ohere iji mee ka ụdị dịgasị iche iche ha dị iche iche na omume nsonye sikwuo ike, na-akwalite ọrụ maka ndị na-acha agba na ụmụ nwanyị na ịhụ na ndị ọrụ na ọkwa niile dị iche iche dị ka ndị ọbịa ha.
Na-ebelata okpukpu abụọ na nkwado maka ndị mmadụ na mbara ala
Ka ndị njem ọhụrụ na-ele anya iji ụdị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-emekọ ihe n'ebumnobi onwe ha, ntinye aka nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka nkwado ga-enwewanye mmetụta ịzụrụ mkpebi. Nnyocha e mere n'ụwa nile n'oge na-adịbeghị anya gosiri na akụkụ atọ kasị elu nke ndị na-azụ ahịa chere na ụlọ ọrụ njem kwesịrị ilekwasị anya na nke a bụ mbelata ikuku carbon, imegharị ihe, na mbelata mkpofu nri. Ha na-enwekwa mmasị n'omume ndị na-ekwu maka plastik ndị a na-eji otu eme ihe, mkpofu mmiri, na nchekwa ọkụ eletrik.
Ebe ndị nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka na-enwe mmetụta nke nrụgide nke akụ na ụba ọrịa na-efe efe na mkpa ọ dị ibute ụzọ imefu ego na ihe ndabere nke idobe azụmahịa na-aga n'ihu, itinye ego na nkwado nwere ike iyi ka ihe na-adịghị mkpa ozugbo.
Ma ụlọ oriri na ọṅụṅụ ekwesịghị ime nhọrọ n'etiti "ime ihe ziri ezi" na ime ihe amamihe dị na ego ma a bịa n'ịkwado.
Ebumnuche bụ ịhazi itinye ego na-adigide na nkwụghachi ego iji gafere ọnụ ahịa nnabata dị mfe. Itinye ego n'ime mmemme jikọtara ọnụ, gwa ya nke ọma, ma nye ndị nwe ya nkwụghachi ego siri ike-ma site na imewe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndụ ndụ, na-arụ ọrụ ike site na sistemu ụlọ, ma ọ bụ itinye aka na nkwekọrịta ịzụrụ ike ọhụrụ n'aha franchisees-ga-aghọwanye iwu kama. karịa ka ewepụrụ dị ka ndị njem ọhụrụ na-agbasi mbọ ike n'ebe ụdịdị ndị ji nkwado na ọrụ ọha na eze kpọrọ ihe.
Na-echeghachi iguzosi ike n'ihe gafere isi
Mmemme iguzosi ike n'ihe nke na-elekwasị anya mkpa nke ndị njem azụmahịa ma dabere na isi ihe na-enweta ego ga-adịwanye mkpa karịa. Ihe dị mkpa ugbu a mmemme maka ndị na-eme njem obere na maka ebumnuche ntụrụndụ. Isi okwu: Na Septemba 2021, 41% nke ndị njem na United States na-eleta ezinụlọ na ndị enyi, yana 41% na-ezumike. Naanị 8% nọ na njem azụmahịa, na 6% na-aga mgbakọ ma ọ bụ ogbako metụtara ọrụ.
Nke bụ eziokwu bụ na atụmatụ iguzosi ike n'ihe dabere na ugboro ole a na-eme njem na-aga n'ihu na omume nke onye njem ọhụrụ yana ebe a na-achọsi ike. Na ọbụna dị ka ọchịchọ na-eburu n'ime ọnwa na afọ ndị na-abịanụ, ngwakọta nke azụmahịa na njem ntụrụndụ ga-agbanwe kpamkpam, na mmemme iguzosi ike n'ihe kwesịrị ikwekọ na omume ndị njem ugbu a iji tinye ha n'ezie.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị na-emegharị mmemme iguzosi ike n'ihe n'ụdị mgbanwe nke usoro ọchịchọ ọhụrụ nọ n'ọnọdụ kachasị mma iji wuo iguzosi ike n'ihe. Nke a pụtara ịza ajụjụ maka ụdị ahụmịhe, ụdị data, na ụdị azụmaahịa. Akụkụ ndị a niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta mmemme iguzosi ike n'ihe dabere na mkpa mmadụ ma na-akwado akụkụ arụmọrụ nke inyefe ha.
Hotel nkwado United States Ọrụ
Ndị America dọrọ aka ná ntị ka ha zere njem ọ bụla na Russia ugbu a
Kedu mgbe Solomon Islands ga-emepe ókèala?
Lufthansa bịanyere aka na kredit kredit mbụ nke €2 ijeri…
Hyatt, Marriott, IHG, Hilton, Radisson, Wyndham sitere na...
Ebe kacha mma na kacha njọ ịzụ ahịa 'Til You Drop
Ndị otu Florida-Caribbean Cruise Association na...